ဖလန်းဖလန်းမထနိူင်တော့တဲ့ တူးဇီးရိုးတန်းကြီးက သူ့ဖျာကို သူ လိတ်နေပြီ...
နိမ့်မြင့်တက်ကျ တရားရ ဟန်
ဘဝတပါး သူ ထွက်မသွားခင်...
တွမ်တိအီလဲဗန်းဘက် ကြည့်ငေး ပြောသွားသေးရဲ့....
လာလည် စာဖတ် မန့်ကြသူများ၊ ရေးဖော်များ၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ကောင်းသောနှစ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်၊ စာ ပိုရေး ပိုဖတ်နိူင်သောနှစ်၊ ပိုက်ပိုက်စုနိူင်သောနှစ်၊ ကျန်းမာသောနှစ်၊ အချစ်ရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေသောနှစ်....အို....အားလုံးပဲ ဆန္ဒရှိသလိုဖြစ်သော နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ကြပါစေရှင်.....
ဒီနှစ်အတွက်တော့ တို့ ဘလော့မရေးတော့ဘူး....နောက်နှစ်မှ တွေ့ကြမယ် စီးယူ နိတ်စ်စရီးယား:)
at December 30, 2010 28 comments: Links to this post
at December 27, 2010 21 comments: Links to this post
at December 24, 2010 18 comments: Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ညက တီးဝိုင်း သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ တီးဝိုင်းနာမည်က One Tea မဟုတ်ပါဘူး။ One Tea က one of the sponsors ပါ။ တကယ်တီးမဲ့ တီးဝိုင်းနာမည်က IC လို့ ချစ်စနိူး ခေါ်ကြတဲ့ Iron Cross ပါ။ အဲဒီ One Tea ဆိုတဲ့ စာလုံး အကြီးကြီးအပေါ်နားလေးမှာ Iron cross ဆိုတာလေး ခပ်မှိန်မှိန် ရေးထိုးထားပါတယ်။ သေချာကြည့်ပါ။ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
လက်မှတ်အရတော့ ပွဲချိန် ညနေ ၆နာရီက ၁၀နာရီပါ။ တကယ်စတော့ ၆ခွဲနေပါပြီ။ တပုဒ် ၅ မိနစ်နှုန်းနဲ့ ဆိုရင်တောင် သီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၆ပုဒ်စာ ကြီးများတောင် အချိန်လွန်သွားပါပြီ။ ပွဲစစချင်း IC ရဲ့ အဖွင့်တီးလုံးတွေဟာ ကျမအတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ နားထောင်လို့ မရိုးနိူင်အောင်ပါပဲ။ IC ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တဦးချင်းစီရဲ့ သူတို့တီးခတ်တဲ့ တူရိယာအပေါ် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်နိူင်မှုတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ မြူးဇစ်တွေဟာ အမြဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါတယ်။
အစီအစဉ်အရ ပထမဦးဆုံး လင်းလင်း၊ ပြီးတော့ အာဇာနည် တယောက် ၃ပုဒ်စီ ဆိုသွားကြပါတယ်။ လင်းလင်းကိုတော့ တေးရေးဆရာအဖြစ် သိထားရာက ကိုလေးဖြူရဲ့ ဘီအိုဘီမှာ သီချင်း ဝင်ကြောင်းပေးတာလေး နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုလေးဖြူရဲ့ "ခဏလေးများ"ဟာ သူ့လက်ရာ ဆိုတာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သီချင်းအချိုလေးတွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်မယ် လို့ မြင်မိတယ်။ အာဇာနည်ကတော့ စည်းတဖက်ခြားနဲ့ စဖွင့်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း အဆိုအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုသွားခဲ့တယ်။
ဝိုင်ဝိုင်း စဆိုလို့ ၃ပုဒ်မြောက်ကျမှ ထင်ပါရဲ့ ဘေစ့်သမား ကိုခင်မောင်သန့် စင်ရှေ့ထွက်တီးပါတယ်။ ဘေစ့်ဂစ်တာ တခုခု loose ဖြစ်နေတာ ပြင်ဆင်ရင်း စင်ဘေးထွက်ပြီး ထိန်းတီးနေခဲ့တာပါ။ ကျမအမြင် ပြောရရင် ဝိုင်ဝိုင်းဆိုတာကို အရင်ပွဲတွေလောက် အားမရခဲ့တာ အမှန်ပါ။ သူ့အလှည့် ၅ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေ အတော် သည်းခံ နားထောင်ခဲ့ကြရပုံပေါ်ပါတယ်။
လာပါပြီ။ မျိုးကြီး အလှည့်ပါ။ နောက်ကလူတွေ အကုန်နီးပါး မတ်တတ်ရပ် ခုန်ပေါက်ကုန်ကြတယ်။ အင်္ကျီတွေ လေထဲ ပစ်မြှောက် ကုန်ကြတယ်။ ခုမှပဲ စင်ပေါ် စင်အောက် တသားတည်း ဖြစ်သွားခဲ့တော့တာ။ ဆေးပါ ဆေးပါ...နဲ့ အသားကုန် လွှတ်အော်ကြ၊ လက်တွေ အပေါ်မြှောက်ကြ၊ ခုန်ကြ ကကြနဲ့ မျိုးကြီးရဲ့ စန်းဟာ လူငယ်ထုအကြား ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ နောက်တော့ ကိုအငဲ...။ နောက်...ကိုလေးဖြူ...။ ဆက်တိုက်ပါပဲ... လူငယ်တွေရဲ့ အာရုံဟာ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေထဲ အင်နဲ့ အားနဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးမျော လိုက်ပါလို့...။ ရော့ခ်တစ္ဆေတွေရဲ့ ဖမ်းစားမှုအောက် ကောက်ကောက်လိုက်ပါလို့...။
နောက်ဆုံးတန်းက ကြည့်ရတဲ့ အရသာကို ကျမ သိတ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲ ပွဲကြည့်စင်လို လှေကားထစ်တွေပေါ်ကမို့လို့ စတိတ်ခ်ျ တခုလုံးကို စီးမိုး မြင်နေရတာရယ်၊ ရှေ့ကလူတွေရဲ့ စည်းချက်အလိုက် ခုန် ခုန် ခုန်နေတဲ့ ခေါင်းလေးတွေဟာ လှိုင်းလုံးကလေးတွေ အတက်အကျလို မြင်နိူင်တာရယ်၊ နောက်ကမို့လို့ မတ်တတ်ရပ်ချင်လည်းရပ်၊ ကချင်ရင်လည်းက အပီကဲလို့ ရတာတွေရယ်ကြောင့် ပွဲတခုလုံးရဲ့ အငွေ့အသက်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရနိူင်တာမို့ပါ။
ကိုလေးဖြူရဲ့ ပထမဆုံးသီချင်း အမဲလိုက်အကမှာတော့ အားလုံး စိတ်တွေ လွှတ်ပေးလိုက်ကြတယ် ထင်ရဲ့။ မတ်တတ်ရပ် ခုန်ကြ၊ ကကြပြန်ပါရော။ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ဒုတိယပိုင်းအစ လင်းလင်းရဲ့ အလှည့် ပြန်ရောက်ပါတယ်။ အားနာလိုက်တာ လင်းလင်းရေ... ဒါပေမဲ့ ဗိုက်ဆာလှပြီ။ ညစာစားခွင့်ပြုဦးလို့ စိတ်ထဲက ပြော၊ အပြေးအလွှား အမြန်သွားစား။ စားပြီး ပြန်ရောက်တော့ ဝိုင်ဝိုင်း အလှည့် တဝက်ကျိုးနေပြီ။ နောက်တခါ မျိုးကြီး...ဓါတ်ပြားဟောင်း၊ ကိုအငဲ...နွံ၊ ကိုလေးဖြူ...ခရီးဆုံးထိ...။ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။
ပွဲသိမ်းတော့ ည ၁၀နာရီခွဲပြီ။ ကျမအပါအဝင် ပရိသတ်က အိမ်မပြန်ချင်ကြသေးဘူး။ ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ဆိုလို့ မဝကြသေးဘူး။ တကယ်ဆို သူတို့အတွက် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလောက်ပဲ ရှိသေးတာ။ ဒီကြားထဲ ခန်းမရဲ့ တာဝန် ရှိသူတွေက ၁၀နာရီကျော်တာနဲ့ ပွဲသိမ်းဖို့ လာလာပြောနေကြတော့ ကြည့်ရတာ အရသာ ပျက်သွားတယ်။ သူတို့ကလည်း တာဝန်အရ လုပ်ကြရတာလေ။ စီစဉ်သူက ညနေ၆နာရီကနေ ည ၁၀နာရီထိပဲ ငှားခပေးထားတာကိုး။ ဒါနဲ့ပဲ အီလည်လည်နဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြရတော့တယ်။
ဖြစ်နိူင်ရင် ညနေ ၅နာရီ စပြီး အလယ်မှာ နားချိန် နာရီဝက်လောက် ရှိသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် နေ့လည် ၁နာရီက ညနေ ၆နာရီ လုပ်ရင်လည်း အဆင်ပြေနိူင်တယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဆိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ဝအောင် ဆိုနိူင်ဖို့ သီချင်းပုဒ်ရေနဲ့ ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် တွက်ချက်ထားသင့်တယ်။ အခက်အခဲတွေကတော့ ရှိမှာပါပဲ။ စီစဉ်သူအနေနဲ့ ဒါလေးတွေကအစ ကြိုတင် တွက်ဆ စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင် ကြည့်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတဲ့ ပွဲလေးတပွဲ ဖြစ်လာနိူင်မှာပါ။
at December 21, 2010 19 comments: Links to this post
at December 18, 2010 21 comments: Links to this post
at December 13, 2010 27 comments: Links to this post
အပေါ်ယံ အမြင်လှဖို့ သက်သက်နဲ့တော့
ချစ်လွန်းလို့ပါ ဆိုတဲ့ ကြိုးချိုချိုတွေနဲ့ ရစ်ပတ် အထပ်ထပ်...
(ငါက) ကိုယ့်ကြိုးကိုယ် ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လိုင်စင်ရ ကကြိုးရုပ်...
အစားခံရမယ်ဆိုရင်တောင် နောက်ဆုံးမှ လက်နက်ချမဲ့ ငါက...ဘုရင်မ ဖြစ်ချင်သူ
နယ်ရုပ်ကလေးတွေလို မင်း ရွှေ့ချင်တိုင်း ရွှေ့မရတာ
အပြစ်ရှာလိုသူအတွက် ထွက်ပေါက်မဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေကြား
တလမ်းမောင်း အချစ်လက်နဲ့ တဖက်မြင် မင်းအကျင့်
ရက်လွန်နေတဲ့ အချစ်တွေက လူကို လောင်မြိုက်စေတယ်...။
ချစ်တာက တခြား မာနက သပ်သပ်
ဓါးစာခံ နှလုံးသား အပိုင်းပိုင်းစုတ်ပြတ်ရင်း
ငိုချင်းနဲ့ မိုးအလင်း ပွဲချီတွေ များလှပေါ့...။
အပေါ်ယံ အမြင်လှဖို့ သက်သက်
ဟောစာတမ်းအရ ဒီနှစ်ထဲမှာ အရွှေ့အပြောင်း ရှိသတဲ့။ အိမ် သို့မဟုတ် အလုပ် အရွှေ့အပြောင်း ရှိမယ်လို့ ဟောထားတာ။ အိမ်ကတော့ ဘယ်လိုမှ ပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိူင်ဆိုတော့ အလုပ်များ ပြောင်းဖြစ်မလား တွေးခဲ့မိတာ။ ဘယ်ဟုတ်လို့လဲ ရုံးနေရာ ပြောင်းတာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါလည်း အရွှေ့အပြောင်းပဲမို့ ဟောစာတမ်း မှန်တယ် ဆိုရမယ်။
သောကြာနေ့ ရုံးပြောင်းဖို့ ဗုဒ္ဓဟူး-ကြာသပတေးမှာ ကိုယ့်အလုပ်စားပွဲက ပစ္စည်းတွေ ကိုယ်စီ သိမ်းကြရတယ်။ အိမ်ပြောင်းတာနဲ့ ဘာကွာလဲဆိုတော့ကာ အိမ်ပြောင်းရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ တအိမ်လုံးစာ ဒိုင်ခံ သိမ်းရပြီး ရုံးကျတော့ ကိုယ့်စားပွဲတခုစာလေးပဲ သိမ်းရတယ်။ မျက်စေ့အောက် အမြင်မတော်တာတွေ တွေ့ရင်တော့ ဝိုင်းကူသိမ်းဆည်း သယ်မ ပေးရတာပေါ့။ နေမှ မနေတတ်ပဲ။ ကိုယ်က မြန်မာကိုး။ ပြောင်းပြီးလို့ အထုပ်တွေ နေရာပြန်ချတဲ့ အခါမှာတော့ ကွာသွားပြီ။ အိမ်မှာဆို အသုံးလိုတဲ့ အထုပ်လေးလောက်ပဲ ဖွင့်ပြီး ကျန်တာတွေ နောက်မှ အေးဆေးလုပ်လို့ ရတယ်။ ရုံးမှာတော့ ဒီလိုမရတော့ဘူး။ နဂါးအမြီး အရှေ့ဘက်လှည့်မှတို့၊ နဂါးခေါင်း မြောက်ဘက် စောင်းမှတို့ အိမ်မှာလို အထုပ်ဖြည်ဖို့ အချိန်ကို စောင့်နေလို့ မရဘူး။ အများနဲ့မို့ ၂ရက်အပြီးဆို ၂ရက်အတွင်း ပြီးအောင် လုပ်ပေတော့ပဲ။
သောကြာနေ့မှာ ရုံးပြောင်းပြီး တနင်္လာနေ့ကျရင် အားလုံး နေရာတကျဖြစ်၊ လုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်ရမတဲ့။ အုပ်ချုပ်သူတွေများ အကွက်ကျကျ လုပ်ရက်ကြပါပေတယ်။ အဲဒီအတွက် ရလာဒ်က ကျမတို့အားလုံး စနေ-တနင်္ဂနွေ အလုပ်ပြန်ဆင်းပေးကြရတာပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဖရီးပါ။ အခမဲ့ပါ။ အလကား ဆင်းပေးရတာပါ။ စိတ်သိတ်ကြီးတဲ့ တချို့က ပိုက်ဆံမရရင်တောင် နားရက် အစားပြန်ပေးဖို့ တောင်းသံ ကြားရပါတယ်။ ကျမတို့ မန်နေဂျာကြီးကတော့ နှာစေးနေလေရဲ့။ ခုတလော မိုးကလည်းများ၊ အေးကလည်း အေးပေသကိုး...။ ကိုယ်တွေကတော့ မြန်မာပီပီ တခါတလေပဲလေ...ထားလိုက်ပါတယ်။ တွက်လွန်း ချက်လွန်းတယ် အမြင်မခံချင်ဘူး။ ရက်အစား ပြန်တောင်းရမှာ အားနာပါတယ်။ ကိုယ်က မြန်မာလေ။
အဲဒီ စနေမနက်က ရုံးအသစ်ရောက်တော့ ထိုင်ခုံမှာ မထိုင်ခင် နိူင်ငံတော်အလံကို အရင်ဆုံး အလေးပြုလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဘေးခုံကတယောက် အမြော်အမြင်ကြီးစွာ ဝယ်လာတဲ့ ပလာတာနဲ့ ပဲနိူ့ရည်နဲနဲ သောက်ရတယ်။ ကန်တင်းက ရုံးနဲ့ နဲနဲ ဝေးတယ်။ ကမ်းမွန်...ဟက်ဖ်အဟာ့တ်-နှလုံးသားရှိကြစမ်းပါ။ သူတယောက်ထဲလည်း မကုန်နိူင်ပါဘူးလေ။ တကယ်ဆို ကျမကတောင် သူ့ကို စိတ်နာသင့်တာ။ ကျမထိုင်ခုံနေရာကို လိုချင်လို့ လုတဲ့သူတွေထဲ သူလည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမက မုန်းစ ပေရှည် မနေချင်ဘူး။ အာဃာတ မထားဘူး။ ပလာတာ ယူစားပြီး ပြုံးပြလိုက်တယ်။
စားသောက်တဲ့ ကိစ္စပြီးမှ ဘုံးထဲက ပစ္စည်းတွေ ဖောက်ထုတ် နေရာချတယ်။
ကော်နက်ရှင်တွေ၊ ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြန်ရတော့ စစ်စရာရှိတာတွေ စစ်၊ အီးမေးလ်စမ်းပို့ကြည့်၊ အိုကေ လိုင်းတွေအားလုံး ပုံမှန် ပြန် အလုပ် လုပ်ပြီ။ နဲနဲတော့ ပျော်သွားတာပေါ့။ လိုင်းပေါ်တက်လို့ ရပြီ။ ပြောခဲ့သလိုပဲ ရုံးပြောင်းတာက အိမ်ပြောင်းသလို အချိန်ကို စောင့်နေလို့ မရဘူး မဟုတ်လား။ ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် ဘလော့ဂ်သည်လည်းပဲ လူကို မစောင့် တဲ့။ ဒီတော့ လိုင်း ပြန်ရရချင်း ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်လို့ ဘာတွေရေးနေတယ်၊ ဘယ်သူ ပိုစ့်အသစ်တင်တယ်၊ ဘာစတေးတပ်စ်တွေ တင်ထားတယ် ဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်ဘူးပေါ့။
ရုံးဟောင်းမှာတုန်းက ကျမနေရာက အပွင့်၊ ကော်ပီယာနားမှာဆိုတော့ လူသွားလူလာ မပြတ်ဘူး။ ဒီရုံးသစ်ကျတော့ ကျမထိုင်ခုံက နောက်ဆုံး ထောင့်ဆုံးမှာ...ဓါးပြတိုက်ဖို့ တိုင်ပင်လို့ ရလောက်အောင် ပရိုက်ဗိတ်စီ ရှိတဲ့နေရာ။ ထိုင်ခုံနေရာ ပလန် ထွက်လာကတည်းက ကျမနေရာကို လာလုကြ၊ သူတို့နေရာနဲ့ လဲခိုင်းကြ၊ နောက်ဆုံး မရတဲ့အခါ မျက်စောင်းလေးတော့ ထိုးဖြစ်အောင် ထိုးကြတဲ့ နေရာပေါ့။ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ခုလို အခြေကျလို့ အတိအကျကြီး ဒီခုံနေရာမှာ ထိုင်လိုက်ရတော့မှ ဟင်းကနဲ ငါ့ခုံဖြစ်ပြီရယ်လို့ စိတ်ချရတော့တယ်။
ဝေါင်း(Wow) ....Your station is so nice !
ဝေါင်း....Absolute privacy hor !
ဝေါင်း....I like your station ! So cool !
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှာ နေကြသူတွေပီပီ တဝေါင်းဝေါင်း လာလုပ်နေကြသေးတယ်။ လူတွေများ ပြောပါတယ်။ နေရာကောင်းလေးများဆို ထိုင်ချင်လိုက်ကြတာ တသက်လုံးပဲ ဖယ်မပေးရတော့ဘူး လိုလို။ ကျမကတော့ တရားနဲ့ပဲ ရှုကြည့်ပါတယ်။ ဒီခုံ ဒီနေရာမှာ ငါ အမြဲ ထိုင်ချင်မှ ထိုင်ရမယ်။ မမြဲတဲ့ သဘောအရ ဟိုးအခန်းထဲက မန်နေဂျာခုံမှာလည်း ထိုင်ချင် ထိုင်ရပေဦးမယ်။
အဲဒီရက်တွေမှာတော့ ပြောင်းရရွှေ့ရ၊ နေရာချရနဲ့ တရုံးလုံး အုတ်အုတ်နဲ့မှ ကြွက်ကြွက်ရယ်။ အလုပ်စားပွဲမှာ ထမင်းစားခွင့် မရှိတာမို့ အောက်ထပ် ထမင်းစားခန်းထဲ သွားစားကြရတယ်။ ထမင်းစားခန်းရောက်ပြန်တော့ မှာထားတဲ့ စားပွဲ ကုလားထိုင်တွေ မရောက်သေးတာမို့ သူလည်း စတန်း၊ ကိုယ်လည်းစတန်း အားလုံး တပျော်တပါးကြီး မတ်တတ်ရပ်စားကြရတယ်။ ဒီကြားထဲ ကော်ဖီဖျော်စက်ထဲမှာ ကော်ဖီစေ့ကုန်နေတာကို ထပ်မဖြည့်ဘဲ စွန့်ဦးတီထွင်ချင်တဲ့ ငနဲသားတယောက်က သရီးအင်ဝမ်း ကော်ဖီမှုန့်တွေထည့်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖျော်ချထည့်လိုက်တာ ကော်ဖီဖျော်စက်ကြီး သင်္ခါရ ဖြစ်သွားပါလေရောလား။
အဲသလို ကျမတို့ရုံးမှာ Brilliant-ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်တွေ ရှိတယ်။ နောင်တချိန်မှာ သရီးအင်ဝမ်း ကော်ဖီမှုန့်နဲ့ ထည့်ဖျော်ရတဲ့ ကော်ဖီဖျော်စက်များ ပေါ်လာလို့ကတော့ ကျမတို့ရုံးက ငတိတော့ အောင်မြင်သွားရှာပြီလို့သာ မှတ်ကြပေရော့။
***အရွှေ့လေးပြီးပြန်တော့ အပြောင်းလေးအကြောင်း ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ကျမ ဘလောဂ့်လေးကို chitkyiaye.com အဖြစ် ပြောင်းထားပါတယ်။ ချစ်ခင်ရတဲ့ တစုံတယောက်ရဲ့ လက်ဆောင်ပါ။ တစုံ နဲ့ တယောက်ဆိုတော့ ၃ယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြင်ညာရှိပီပီ အတွေးမစောပါနဲ့ဦး။ တယောက်ထဲပါ...သူကလေးက chitkyiaye.com ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ချစ်ခင်စွာ ဝယ်ပေးလာတော့ ကျမမှာ နှလုံးသားတွေ ပြုတ်ကျမတတ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ (ဇာတ်နာအောင် ဒီလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့လေ:))
ခုထိတော့ ဘလော့စပေါ့ကနေ ဒေါ့ကွန်းကို ရီဒါရိုက် လုပ်ပေးတာမို့ အသစ်တင်တိုင်း တက်နေပါဦးမယ်။ မတက်တော့တဲ့ တနေ့ကျရင် ကျမလင့်ခ်လေးကို ပြောင်းချိတ်ပေးကြပါနော်။ တကယ်ပါ ဘလော့ဂ်တွေ သွားဖတ်လို့ ကျမလင့်ခ် ချိတ်မထားရင် သိတ်ငိုချင်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ အမျိုးမို့ပါ။
ရေးဖော် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လင့်ခ်တွေကိုလည်း သတိရသလောက် ပြန်ချိတ်ထားပါတယ်။ လင့်ခ်ချိတ်ဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်များ လင့်ခ်ထားခဲ့ပြီး စီဘောက်မှာ တိုးတိုးလေး ပြောသွားကြပါနော်....:)
at December 07, 2010 26 comments: Links to this post
မနေ့ည-၄ ဒီဇင်ဘာက ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းရှမ်းတယောက်ရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ ဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ထိုင်ခုံ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ အဝင်ဝမှာ ဝေပေးတဲ့ ညစာ ထမင်းဗူး ဖွင့်စားတယ်။ ဆာနေတာကိုး။ ရှမ်းဟင်းလေးတွေက စားလို့ အတော် မြိန်ပါတယ်။ စားပြီးမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိရတယ်။ တောက်တောက်စင်းထားတဲ့ ကြက်သား မုန်ညှင်းချဉ်က တခွက်၊ ငါး ကင်ပွန်းချဉ်က တခွက်၊ နောက်တခွက်ကတော့ ပဲပုတ်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း အရသာပဲသိပြီး ဘာဟင်းမှန်း မသိတဲ့ တခွက်ပါ။ စားကောင်းပါတယ် ထမင်းက နဲလို့ မဝတာ တခုပါပဲ:)
မြေတပြန့်ထဲမှာမို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ကိုယ် ရိုက်မယ်လုပ်တိုင်း ရှေ့လူခေါင်း ရှောင်ရ၊ မီးခိုးငွေ့တွေ လွှတ်လိုက်၊ မီးရောင်စုံ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့မို့ ပုံထွက် မကောင်းလှဘူး။ ကိုယ်က ညံ့တာလည်း ပါမှာပေါ့လေ။ ပိုစ့်တင်ဖို့ရာ ပုံထွက်မကောင်းတာမို့ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်သွားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ကြည့်ခဲ့ရသမျှ ပြန်လည်ဝေမျှချင်တာရယ်၊ အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်တာရယ်ကြောင့် မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ပိုစ့်တင်လိုက်ရပါတယ်။ မျက်စိစုံဖွင့်ပြီး ဖတ်ကြပါကုန် :)
အမ်စီ ကောင်မလေး၊ သူ့ကို ငရုတ်သီးတောင့် အသေးလေးလို့ ခေါ်ကြသတဲ့။ သေးပေမဲ့ အတော်စပ်တဲ့ သဘော။ အစီအစဉ်တခုနဲ့ တခုအကြား နှောင့်နှေးတာတွေအတွက် သူ့ခမျာ စကားတွေ ရှာကြံ ပြောရရှာတယ်။
အမ်စီ ကောင်ကလေး၊ ဒီရှမ်းကလေးကတော့ စကား ဝဲတဲတဲ ရှက်တက်တက် အမူအရာနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းသား...
သိတ်လှတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုး...
ရှမ်းမလေးတွေ ချောသလောက် ရှမ်းကလေးတွေ အတော် ချစ်ဖို့ကောင်း....
ရှမ်းအမျိုးသမီး အဆိုရှင် နန်းခမ်းနောင့်ပါ။ ကျမ စာလုံးပေါင်း မှားနိူင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသံ၊ သူ့ရဲ့ ဆိုဟန်ကို သဘောကျမိပါတယ်။ အသံပါဝါ အားကောင်းပြီး မုဒ်အပြည့်နဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ ဆိုနိူင်သူမို့ ရှမ်းသီချင်းတွေ ဆိုသွားလို့ ဘာမှ နားမလည်ပေမဲ့ ခံစားလို့ ရခဲ့ပါတယ်။
ဆုန်သင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အားပါးတရပါပဲ။ အာရ်ကြီးလည်းပဲ အတော်ပျော်နေပုံပါ။ ပွဲပြီးတော့ ည ၁၁နာရီ ကျော်နေပါပြီ။ ပွဲလေးက လွတ်လပ်နွေးထွေးစွာနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပွဲလေးတပွဲပါ။ ကျင်းပတဲ့နေရာ ဒီထက်ပိုကောင်းရင်၊ အမ်စီကောင်မလေး စကားတွေ သိတ်မပြောရရင်၊ ညစာထမင်း နဲနဲ ပိုများရင်၊ အရှောင်ကောင်းတဲ့ ကျိုင်းတုံသားနဲ့ တွေ့လိုက်ရရင်တော့ ပိုပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ပွဲလေးတပွဲ ဖြစ်မှာပါ။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ တောင်ပေါ်ရှမ်း၊ တောင်အောက်ရှမ်း၊ တောင်စကောစကရှမ်း၊ ကျမတို့လို ဟိုရှမ်းဒီရှမ်း...အားလုံးပဲ ပျော်စရာ ရှမ်းနှစ်သစ် မင်္ဂလာ ဖြစ်ကြပါစေရှင်...
at December 05, 2010 17 comments: Links to this post